Buy Non-Stick Barbecue Grill Mat - Free Shipping & No Tax | WoopShop®
အရောင်2ဖျာပေါင်း 1 Tong 3pcs ဖျာ 2pcs ဖျာ 1pcs ဖျာ
2 ဖျာပေါင်း 1 Tong 3pcs ဖျာ 2pcs ဖျာ 1pcs ဖျာ
Non-Stick ကင်ဘီကင် - ၂ ဖျာအပေါင်း ၁ တုံး backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
feature ကို: non-Stick,အပူခံနိုင်ရည်,အလွယ်တကူသန့်ရှင်းရေး
kit အရေအတွက်: 3-5
နံပါတ်အတွက် non-stick BBQ ကင် Mat
အမျိုးအစား: Tools များ
ပစ္စည်း - အစားအစာတန်း Teflon
ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 40 x 33cm, အထူ = 0.25mm
feature ကို: ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော BBQ Mat,Non-stick ကင်အပူခံနိုင်ရည်ရှိ Teflon Mat,လွယ်ကူသန့်ရှင်းသောကင်လှေကားများ၊ကင်မုန့်ဖုတ်
100% Non-Stick, သငျသညျအမဲဆီမပါဘဲကင်နိုင်ပါတယ်နှင့်ဖျာနှစ်ပေါင်းများစွာပြန်သုံးနိုင်သည် Non-stick BBQ ကင်ဖျာသည်အသေးငယ်ဆုံးစားရိတ်များကိုတောင်မှဆန်ခါမှတဆင့်မကျရောက်အောင်ကာကွယ်ပေးသည်။
သင်၏ကင်ပုံအသစ်ကိုအသစ်စက်စက်၊ အပူခံနိုင်မှု ၃၀၀ မှ ၅၀၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိထားပါ။ BBQ Grill Mat ကိုသုံးသည့်အခါမီးမှ ၄ လက်မအကွာအဝေးတွင်ထားပါ။ လွယ်ကူရှင်းလင်းသန့်ရှင်းစွာထပ်ခါထပ်ခါသုံးနိုင်သည်
FDA မှထောက်ခံချက် - ကျွန်ုပ်တို့၏ BBQ ကင်ဖျာများသည် ၁၀၀% PFOA - အခမဲ့ပစ္စည်းများနှင့်ပရီမီယံ PTFE - ဖန်မျှင်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်၊ PFOA၊ ဆီလီကွန်သို့မဟုတ်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောဓာတုပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် FDA မှလုံခြုံသည်ဟုသတ်မှတ်သည်
Char-Broil၊ Weber၊ ကြွေထည်၊ မီးသွေးနှင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်သုံးကင်များအပါအ ၀ င်မည်သည့်ကင်အတွက်မဆိုအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်၏အထူးကင်သို့မဟုတ်မီးဖိုနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်လည်း၎င်းတို့ကိုဖြတ်နိုင်သည်။ ကင်အမဲသား၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ ငါး၊ ပုဇွန်၊ ပီဇာပင်၊ ကြောင်းလည်ချောင်းနာစခန်းချနေရာသို့မဟုတ်ပန်းခြံကင်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော!
BBQ ဖျာ + 1 pcs 20cm အစားအစာလျှာ (သင်ရွေးချယ်ပါက)
ဒါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာယူ။ အရည်အသွေးဖော်ပြထားသည်နှင့်ကိုက်ညီ။ ထုတ်ကုန်နှင့်ကျေနပ်မှု။ ငါစောင့်ဆိုင်းလိုတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်။
Всёдоставлено! Качествоинструментаоставляетжелатьлучшего! Коврикипроверюпозже, т.к။ поканесезоншашлыков! ဒေါ်လာစျေး3ဒေါ်လာတန်ရှိပါကရောင်းချသည်
တစ် ဦး lo descrito, espero disfrutarlo, recomiendo al vendedor
Sehr gute Qualität! Danke WoopShop
အလွန်အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့။ အားလုံးစူပါပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။